Isabalalisa amanzi → Izikhungo zomphakathi • Amahhovisi • Izikhumulo zezindiza • Amabhange
Udinga i-dispenser yamanzi ezindaweni zomphakathi, ehhovisi, esikhumulweni sezindiza, ebhange? Inkampani yaseWater Point iyanikezela abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela, abaphuzayo, Umthombo wabaholi bomhlaba embonini, esingaba ngumhambisi kuphela ePoland.
Enye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zomzimba womuntu amanzi. I-hydration efanele yomzimba nokwaneliseka komile kunomthelela omuhle kwezempilo nakuzo zonke izinqubo zokuphila emzimbeni wethu.
Isidingo samanzi sikhuphuka ikakhulukazi ehlobo, lapho sizwa omile kakhulu ngesikhathi sezulu esishisayo. Ngakho-ke, isixazululo esihle yiziphethu, imithombo nemithombo yokuphuza amanzi etholakala ezindaweni zomphakathi.
Le mishini ihlinzeka ngamanzi ahlanzekile futhi anempilo. Ngenxa yemifino efakwe kubo, wonke umuntu angaphuza amanzi amasha futhi amnandi noma agcwalise ibhodlela lawo noma ibhodlela lamanzi ngalo. Izitsha zanamuhla zokuphuza amanzi zenzelwe ngendlela yokuthi hhayi abantu abadala nezingane kuphela, kodwa futhi nabantu asebekhulile bangazisebenzisa kalula.
Imithombo yokuphuza amanzi ihlinzeka ngamanzi ahlangabezana nazo zonke izindinganiso ezidingekayo, ngakho-ke kuphephile ukuphuza futhi, ngaphezu kwalokho, kunambitheka kakhulu.
Izindawo zokuphuza amanzi ezinjengalezi zingafakwa ezindaweni zomphakathi, ezitolo ezinkulu, ezikhumulweni zezindiza, emapaki nasezindaweni zemidlalo, nasezinkampanini, ezikoleni nasezibhedlela.
Lawa madivayisi enza abantu bahlala kulezi zindawo bazizwe bekhululekile futhi banganakekela impilo yabo ngokuphuza amanzi ahlanzekile namasha.
Ngakho-ke, izithako ezinamanzi okuphuza zitholakala nomaphi lapho sichitha khona isikhathi esiningi, futhi asihlali sinethuba lokuthenga amanzi amasha noma esinye isiphuzo. Iziphuzo zokuhambisa amanzi hhayi nje kuphela umthombo wamanzi amasha futhi amnandi, kepha futhi, ngenxa yokwakhiwa kwazo kwendawo yonke nesimanjemanje, ziyinto eyengeziwe enomthelela ekuhlobiseni izikhala zomphakathi.
Iziteshi zamanzi okuphuza zinganikeza amanzi kahle, ngenkathi kunciphisa izindleko zokuhlinzekwa kwamanzi nokusatshalaliswa, futhi zinikeze impikiswano yezemvelo ngokunciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwamabhodlela epulasitiki nokunciphisa ukukhiqizwa kwemfucuza.
Iziphuzo zokuphuza amanzi neziphethu zisiza ukukhuthaza indlela yokuphila enempilo ngokwakha umkhuba wokuphuza amanzi emvelo amnandi kunokuba uphuze iziphuzo ezinoshukela.
Ukuhlinzeka ngamanani angenamkhawulo wamanzi acwebile we-crystal, atholakala kunoma yisiphi isikhala somphakathi ubusuku nemini, kwandisa ukusebenza kwempilo yempilo kanye nokuqwashisa ngomphakathi, futhi kunciphisa kakhulu izindleko ezihambisana nokulahlwa kwenqwaba yemfucumfucu yedolobha.
Iziphuzo zokuphuza amanzi, iziphethu nemithombo nakho kusindisa isikhathi, isikhala nemali eyayikade isetshenziswa ukugcina amanzi asebhodleleni.
Izitsha zokuphuza zamanzi zenziwa ngezinto zesimanje, ukuqinisekisa ukuqina kwesikhathi eside nezindleko eziphansi zokusebenza.
Idizayini efanelekile yedivaysi iqinisekisa ukuthi amanzi ahlinzekiwe anekhwalithi ephezulu, ukusha nokunambitheka okumnandi, futhi kuphephile.
izihambisi zamanzi ezingeyona isilindaamanzi ahlanzekile ompompiukulethwa kwamanzi esikhumulweni sezindizaisitsha samanzi sebhangeisitsha samanzi sehhovisiisitsha samanzi emahhovisiiziphuzo zamanzi okuphuza eposiniizitsha zamanzi entwasahloboamanzi e-carbonatedamanzi ashisayoiqonde empompiniamanzi amahhovisiamanzi esikhumulweni sezindizaamanzi ehhovisiamanzi enempilo ompompiamanzi abandayoamanzi entwasahlobo ezindawo zomphakathi